Mbola tsy voatendry kosa ireo teknisianina hanampy ny Japan Actuel’s amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Ny federasiona malagasin’ny baolina kitra avokoa no hanakarama azy ireo, araka ny politika napetrak’izy ireo hanatsarana kokoa ity taranja be mpankafy ity taorian’ireo faharesena nateti-pitranga tato ho ato. Ankoatra ireo dia hiantso mpilalao dimy avy any Mahajanga, izay mbola mijanona ho tsiambaratelo ny anarany, ny ekipan’ny Formation FC.
« Efa samy manoman-tena avy any tsirairay mialoha ny fampivondronana miaraka, izay hatao amin’ny fiandohan’ny volana janoary ho avy izao ary mihevitra ny hanao lalao tsapa valo farafahakeliny izahay », hoy i Tipeh, mpanazatra ny Tana Formation FC. Ny an’ny Japan Actuel’s kosa dia mihevitra ny hitsapa ny ekipany amina lalao tsapa efatra eo ho eo izy ireo mialoha ny hiatrehana ny fihodinana voalohany ho an’ny « champions league » afrikanina. « Mbola ao anatin’ny fialan-tsasatra ny mpilalaonay amin’izao ary amin’ny 4 janoary vao hanomboka amin’ny fanomanan-tena », hoy i Abdou Bin, mpanazatra ny Japan Actuel’s.